Fahasemporana :: Ankizy efatra lasibatry ny kilalao mampidi-doza • AoRaha
Fampitandremana manoloana an’ireo kilalao efa nitera-doza. Ankizy efatra no fantatra fa tsy maintsy nentina tampoka tamin’ny tobim-pahasalamana taorian’ny filalaovana an’ireny kilalao plastika tsofina ireny, araka ny tarehimarika azo avy amin’ ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Avy amin’ny lalan’ny rivotra mampaneno an’ireto karazana kilalao ireto no voalaza fa maha sondrovaka ny ankizy. Nisy tamin’ireo zaza niharam-pahavoazana no notsaboina teny amin’ny hopitaly Soavinandriana. 11 taona ny iray tamin’izy ireo. “Rehefa nanontaniana io ankizy io dia namaly fa sady nitsoka ny kilalao izy no toy ny nisy rivotra niditra tampoka tany anatiny. Sempotra be izy nony avy eo. Tsy maintsy no­en­tina taty amin’ny hopitaly. Iray andro ihany no nanao­vana ny fanalana ny singa tafiditra tany anatiny sy ny an’ny zazalahikely iray hafa, izay dimy taona”, araka ny fitantaran’ny mpitsabo iray teny amin’ny hopitaly Soavi­nandriana.
Notsindrian’itsy mpitsabo itsy fa saika misy ankizy iharan’ ny tranga toy izao hatrany isan-taona. Voalaza fa mety hiteraka loza mitovy amin’ izany ihany koa ireny balônina lalaovin’ny ankizy ireny.
Noho ireo tranga nisesisesy ireo no antony nanaovan’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka fanambaràna ny amin’ny tokony hitandreman’ireo ray aman-dreny. “Mila mailo amin’ny kilalao homena ny zaza. Raha sondro­vaka dia any amin’ny lalan-drivotra avy hatrany no lasi­batra. Mandoa vola anefa ny fitsaboana. Misy ankizy voa foana isan’andro ka izay no ilàna ny fitandremana”, hoy ny dokotera Rakotoa­rivony Manitra, talen’ny fampiroboroboana ny fahasala­mana eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Ny mpivarotra kilalao iray tetsy Andohan’Analakely kosa no nilaza fa: “hitany mihitsy izany fampitandremana izany saingy ny entana efa azo, ka tsy afaka haverina intsony fa tsy maintsy amidy. Hosoloina ireo entana hafa amin’ny manaraka” , hoy izy. Mbola miparitaka eny an-tsena tokoa ireo karazana kilalao ireo.
Fifamoivoizana :: Hiitatra ny fahatapahan-dalana eto an-drenivohitra